Ireo laharana SEO
Inona avy ireo fizarana SEO ambony indrindra amin'ny 2017?
Alatsinainy Aprily 3, 2017 Alatsinainy Aprily 3, 2017 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ireo orinasa goavambe marobe izahay amin'ny fanatsarana ny fahitana ara-biolojika azy ireo ankehitriny ary gaga tokoa amin'ny habetsaky ny motera fikarohana nataony teo aloha niaritra izy ireo, tsy mahazo azy ireo. Nandoa orinasa ara-bakiteny izy ireo izay nanimba ny fanatsarana azy ireo.
Orinasa iray no nanangana toeram-pambolena domains avy eo dia nipoitra pejy fohy misy ny fitambarana teny lakile misy, ary nampifandray ireo tranonkala rehetra. Ny valiny dia fisavorovoroan'ny faritra, fisafotofotoan'ny marika ary valin'ny motera mahatsiravina. Nifindra monina izahay ary nanitsy ny faritra rehetra ho lasa iray, avy eo nanangana pejy feno fampahalalana ho an'ny lohahevitra tsirairay… ary ao anatin'ny 90 andro dia tsy mitana toerana ambony ambonin'ny toerana nisy azy ireo izahay.
Raha ny consultant SEO anao Optimization misy ny asa ivelan'ny fisarihana sy fanatsarana ny zavatra niainan'ny mpitsidika, mety hahita olana ianao. Douglas Karr, DK New Media
Ity infographic avy amin'ny Dot Com Infoway ity dia manao asa mahafinaritra mampisaraka sy manome laharam-pahamehana ny asa tokony hataonao raha manantena hahita fahitana ianao:
Fahazoana andraikitra amin'ny finday - satria maro ny mpampiasa motera fikarohana mampiasa finday, miantoka ny maha-manatsara ny fahaizan'ny mpampiasa finday anao, anisan'izany ny fampihenana ny hafainganana sy ny fampiasana ny pejy findainao Google AMP.
Vokatra eo an-toerana - efa nizara an-taonany maro izahay Manampy ny fahitana nasionaly ny fahitana fikarohana eo an-toerana fa mbola mahagaga ihany ny isan'ny orinasa tsy miraharaha an'io fotoana tsara io. Alao antoka fa voatanisa tsara ny orinasanao Google ho an'ny orinasa ary mampiasa citation (NAP - anarana, adiresy, nomeraon-telefaona) amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokalanao.
Votoatiny sy rohy misy kalitao - eto no mampiroborobo ny mpanolo-tsaina lehibe ary mampatahotra anao ireo mahatahotra. Ny tanjonao dia tokony hanangana atiny lehibe (toy ny infografika) ary hametraka azy ireo amin'ny tranonkala mifandraika amin'izany izay mampiseho azy ireo (toy ny ataontsika amin'ny DCI). Ity infographic ity dia misy lanjany ho an'ny mpihaino antsika ka misy dikany ny hanomezana voninahitra azy ireo amin'ny fampifandraisana amin'ny tranokalany. Na izany aza, mametraka ad-hoc fotsiny backlinks amin'ny domba tsy misy dikany sy tsy dia misy dikany dia tsy hitondra anao any ho any.
Paikady fampiroboroboana - fananganana endrika votoaty marobe (audio, video, infographics, micrographics, socialgraphics), fandresena ny fifaninanana, tsy fanekena ny rohy tsy ilaina, fampiroboroboana ny fanamarihana marika, fanomezana valiny an-tserasera, famokarana buzz haino aman-jery sosialy, fanatsarana ny fikarohana amin'ny feo ary ny fitazonana ny tranokalanao ho vonona hatrany. paikady tsara rehetra hampiroboroboana ny atiny.
Ity ny infographic, Google SEO Ranking Faktiora sy paikady fampiroboroboana ho an'ny 2017:
Tags: tenyfanovana rohydciDK New Mediadot com infowaygoogle ampgoogle ny orinasakotoe-javatra laharana googlegoogle + ho an'ny orinasafikarohana eo an-toeranafilaharan'ny fikarohana eo an-toeranafahitana fikarohana eo an-toeranaMarketing InfographicsLahatsary Marketingmicrographicsnomeraon-telefaona adiresy anaranatorimaso kely,lafin-javatraSEOpaikady fampiroboroboana seoseo laharanasocialgraphics
Loharano 15 hitadiavana sy hanao pirinty mpanao gazety sy mpanao gazety
Aug 12, 2011 amin'ny 9: 56 AM
Amin'ny laharan'ny SEO sy ny olana amin'ny fifamoivoizana bebe kokoa. Ny olona rehetra dia manandrana mahazo toerana ambony sy fifamoivoizana bebe kokoa. Mba hahazoana atiny fifamoivoizana bebe kokoa, teny lakile, hafainganam-pandeha fampidinana pejy dia tafiditra ao. Ity misy infographic mahafinaritra handinihana ny tranokala misy teny hafa.
serivisy fananganana rohy seo
Dec 10, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
hehehe .... sary tena tsara, ary tena mahaliana, mazava be…
Ny maha-laharana voalohany anao dia tsy asa mora, mila mahay mamorona ianao ary tokony ho vonona hiasa mafy.
Apr 6, 2017 amin'ny 12: 32 AM
Tiavo ny sary! Misaotra tamin'ity lahatsoratra mahafinaritra Douglas ity! Nanontany tena aho hoe, mieritreritra ve ianao fa ny fahombiazan'ny vahinin'ny vahiny ho tetikady fananganana rohy dia mbola hahomby amin'ity taona ity?
Apr 6, 2017 amin'ny 12: 35 AM
Eny… fa amin'ny maha-mpitory ahy dia tena reraka aho amin'ny lahatsoratra antsasaky ny boriky izay tadiavin'ny olona hampiditra rohy mankamin'ny tranokalako. Tsy manana olana amin'ny rohy iray aho rehefa mahatalanjona sy manan-danja amin'ny mpihaino ahy ny fampahalalana. Fanaratsiana fotsiny ny zavatra hafa rehetra.
Apr 6, 2017 amin'ny 8: 52 AM
Mila miombon-kevitra aminao aho 🙂 fa misy maningana hatrany. Raha voasoratra tsara ny lahatsoratra ary manome lanja, tsy ratra ny rohy iray.
Apr 18, 2017 amin'ny 11: 04 AM
Rohy misy kalitaon'ny Ppoor raha ny marina afaka maratra nefa!